म्याड्रिड — मा खेल दिन को लागि रियल म्याड्रिड फुटबल टीम, क्षेत्र आसपास Estadio सान्टियागो Bernabéu एक आउटडोर तिहार । मा स्टेडियम नजिकै, शहर गरेको वित्तीय जिल्ला, क्लब प्रशंसक भेला तीव्र आवेग छ । मात्र ठाउँ भन्दा बढी लोकप्रिय यो 81,000 सीट स्टेडियम हेरिरहेका लागि रियल म्याड्रिड र शर्त पल्ट । स्थित सीधा भर Calle राफेल Salgado देखि Estadio सान्टियागो Bernabéu गरेको उत्तरी अन्त, सानो खेल wagering सुविधा लुकेको छ द्वारा रूखहरू र अन्य भूनिर्माण छ । भित्र, पाँच इलेक्ट्रनिक सट्टेबाजी टर्मिनल ग्राहकहरु प्रदान नहुनु मा रियल म्याड्रिड खेल परे गरेको बिन्दु फैलियो । तला-स्क्रीन टीवी शो प्रतियोगिता जीवित छ । जब रियल म्याड्रिड खेल छ, अन्य घटनाहरु खेल हो बिर्सेका । "We' re सबै भन्दा राम्रो स्थान मा शहर," भन्नुभयो मारिया Romero डी Alba, प्रबन्धन गर्ने शर्त पल्ट । यो साइट द्वारा संचालित छ Codere Apuestas, एक भाग को Codere समूह, स्पेन गरेको मात्र सार्वजनिक कारोबार खेल कम्पनी हो । कार्य मा शर्त पल्ट बस भन्दा बढी छ रियल म्याड्रिड । यो सुविधा प्रदान गर्दछ, एक व्यापक मेनु को खेल सहित, युरोपेली फुटबल, घोडा दौड, ओटो रेसिंग, टेनिस — Spaniard राफेल नडाल एक पटक, संसारको शीर्ष-ranked टेनिस खेलाडी, अझै पनि एक इष्ट खेलाडीले क्षेत्रीय मा — र अमेरिकी-आधारित घटनाहरू, यस्तो मेजर लिग बेसबल रूपमा र NBA र NHL playoffs.खेल wagering स्पेन मा एक booming व्यापार । Since the mid-2000s, जब स्पेनी नियमहरू अधिनियमित थिए विनियमित गर्न खेल जुवा, गतिविधि फेला बढ्दै रोमको सेना को अनुयायीहरूलाई.समर्पित wagering पार्लर, जस्ता शर्त पल्ट, देखायो देश भर स्लट lv ग्राहक सेवा नम्बर.
Codere लगभग 200 सट्टेबाजी स्थान मा स्पेन । शर्त पट्टी छ तेजी विस्तार.एक दर्जन भन्दा बढी मा स्थित हो, म्याड्रिड । "यो एक छ सबै भन्दा राम्रो," Romero डी Alba को भन्नुभयो त्यो स्थान प्रबन्धन भर देखि स्टेडियम छ । प्रतियोगिता बढ्दै छ । जिब्राल्टर-आधारित Ladbrokes र एक स्पेनी निगम गठन Sportium छन्, जो सानो सट्टेबाजी सैलून संग स्लट मिसिन र खेल wagering टर्मिनल.भन्दा बढी छन् 170 आउटलेट भर स्पेन । मोबाइल wagering पनि पक्रने आगो । यो commonplace लागि रियल म्याड्रिड प्रशंसक समेत ती बसिरहेका स्टेडियम भित्र — ठाँउ मा-खेल wagers मा जरिवाना kicks र अन्य नाटकहरु माध्यम मोबाइल फोन छ । क्षमता संग legalization को खेल wagering एक तातो-बटन मुद्दा मा संयुक्त राज्य अमेरिका, खेल लीग र खेल उद्योग मा लाग्न सक्छ स्पेन र अन्य युरोपेली देशहरुमा लागि एक मोडेल रूपमा विस्तार । धेरै खेल लिग आयुक्त — नेतृत्व, यो NBA गरेको आदम चाँदी — नरम आफ्नो एक पटक-कठोर विरोध गर्न खेल सट्टेबाजी.वाशिंगटन आधारित अमेरिकी खेल संघ आज्ञा एउटा आन्तरिक अध्ययन मा खेल सट्टेबाजी र वृद्धि को दैनिक कल्पना खेल वेबसाइटहरु के-के छ सबै भन्दा राम्रो नहुनु मा भावनाहरु. AGA अध्यक्ष Geoff फ्रीमैन भने परिणाम जारी हुनेछ पछि यो वर्ष । स्पेन र अन्य युरोपेली देशहरुमा राम्रो तरिकाले अगाडी यो U. मा कानूनी खेल सट्टेबाजी अखडा । शर्त पल्ट, Sportium र अन्य कानूनी जुवा स्थान commonplace छन् — लाग्छ, Starbucks, वा देखि, हामी कुरा गरिरहेका छौं, जुवा Dotty गरेको छ । तर स्थानहरू पनि लुकेको छ । You don ' t see चमकती नियोन र मा-आफ्नो-अनुहार विज्ञापनहरू.यो ठाउँमा सजिलै हुन सक्छ लागि गलत taverns.शर्त पल्ट, उदाहरणका लागि, एक जस्तै देखिन्छ मौज संग पूर्ण बार सेवा र तपस भान्सा । सहज कुर्सियाँ र सोफे चारै ओर टेलिभिजन स्क्रीन, जो शो घटनाहरु खेल साथै समाचार कार्यक्रम । मात्र संकेत जुवा को हो पाँच सट्टेबाजी टर्मिनल र चार स्लट मिसिन dispersed वरिपरि सुविधा छ । जस्तै सबै कारोबार मा स्पेन, धूम्रपान मात्र अनुमति बाहिर । Gamblers संग साइन अप शर्त पल्ट माध्यम Codere र खाता सिर्जना एक खेलाडी गरेको कार्ड र पासवर्ड.यो संख्या: बंद मा सट्टेबाजी टर्मिनल अघि wagers राखिएको सकिन्छ.भुगतान मा बनाएको सुविधा गरेको घडि. Codere पनि आवश्यकता अनलाइन ग्राहकहरु दर्ता गर्न आफ्नो खाता मा एक देशमा आधारित स्थान के-के छ सबै भन्दा राम्रो अनलाइन क्यासिनो. Codere मा एक उपस्थिति छ आठ देशहरू र संचालित पाँच क्षेत्रमा को कानूनी wagering सहित, खेल सट्टेबाजी.कम्पनी प्रबन्धन भन्दा बढी 52,000 स्लट मिसिन र मालिक दुई racetracks के-के छ सबै भन्दा राम्रो नहुनु मा भावनाहरु.
Codere गरेको अनलाइन सट्टेबाजी उपस्थिति विस्तार भएको छ । स्पेन अधिनियमित अनलाइन खेल नियमहरु मा 2011 सबै भन्दा राम्रो के छ ब्लेक जेक अनलाइन साइट. लाइसेन्स संचालक, यस्तो Codere, बाध्य गर्न देश ले एक बलियो रुख विरुद्ध अवैध अनलाइन खेल कारोबार र बन्द-किनारमा संचालक छैन लाइसेन्स मा स्पेन । उदाहरणका लागि, मुख्य प्रायोजक को लागि रियल म्याड्रिड बीच 2007 र 2013 मा थियो, इन्टरनेट खेल विशाल Bwin.पार्टी खेल.कम्पनीको नाम आयोजित प्राथमिक अन्तरिक्ष को सामने मा रियल म्याड्रिड गरेको जर्सी — शीर्ष को एक बिक्री टुक्रा खेल को व्यापार मा स्पेन । तर जिब्राल्टर-आधारित Bwin छैन लाइसेन्स मा स्पेन । एक स्पेनिश अदालत शासन गरे 2013 मा कि कुनै पनि किसिमको अनलाइन खेल बिना एक स्पेनी लाइसेन्स अवैध थियो, र रियल म्याड्रिड थियो परिवर्तन गर्न बाध्य प्रायोजकों.दुबई-आधारित विमान इमिरेट्स reportedly छ तिर्ने 30 लाख यूरो गर्न एक वर्ष ($40 लाख) स्थान को नारा "उड इमिरेट्स" भर रियल म्याड्रिड गरेको जर्सी । Bwin, अझै पनि आधिकारिक "डिजिटल साथी" को रियल म्याड्रिड । कानूनी अनलाइन खेल मा स्पेन आकर्षित लाखौं दर्ता ग्राहकहरु अनुसार, देशको नियामक शरीर । बजार 25 प्रतिशत कर दर लागि खेल राजस्व, जो निरुत्साहित केही संचालक छ । अनुसार नियामक तथ्याङ्क को आधा, अनलाइन gamblers wager मा खेल जबकि 40 प्रतिशत ग्राहकहरु खेल्न इन्टरनेट पोकर.अनलाइन खेल वृद्धि छैन धीमा शर्त पल्ट विस्तार । बढी स्थानहरू छन् लागि योजना म्याड्रिड । "यो एउटा रोमाञ्चक व्यापार, र हामी छौँ बढ्न जारी," Romero डी Alba भन्नुभयो । .
क्यासिनो राखने मा मनिला 2021
एल्विस presley स्लट मिसिन बिक्री को लागि
Roulette pour chaise हाउटे किला एक
एउटा चन्द्र स्लट ठूलो जीत
के-के छ सबै भन्दा राम्रो नहुनु मा भावनाहरु
के-के छ सबै भन्दा राम्रो अनलाइन क्यासिनो
सबै भन्दा राम्रो के छ ब्लेक जेक अनलाइन साइट